कसरी हुन्छ, हाम्रो अस्पताल, राम्रो अस्पताल ? धौलागिरी अन्चल अस्पतालप्रति घट्दै विश्वसनीयता ! – ebaglung.com
२०७५ श्रावण १४, सोमबार १७:००	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार, विविध
बागलुङ २०७५ साउन १४ । बागलुङ जिल्ला अस्पताल, धौलागिरी अन्चल अस्पतालमा स्तरोन्नति भएपछी यस क्षेत्रका नागरिकहरुले स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा फड्को मार्ने जुन अपेक्षा राखेका थिए त्यस्ले साकाररुप लिन सकेको छैन । अढाई दशक पहिले सम्म एक वा दुई जना डाक्टरले सेवा प्रवाह गर्दा बागलुङ अस्पतालको सुगन्ध जति बागलुङ, म्याग्दी र पर्वतमा फैलिएको थियो अहिले १५ विशेषज्ञ सहित २१ जना डाक्टरहरुको दरबन्दी हुँदा पनि अस्पतालप्रति बिरामीहरुको आकर्षण देखिदैन । धौलागिरी अन्चल अस्पतालको गुनगान कहि सुनिदैन ।
डाक्टरहरुवीच समन्वयको अभाव र उपचारार्थ अस्पतालमा आउने बिरामीहरुप्रति उचित मानवीय व्यवहार नहुनुले अस्पतालबाट प्रवाह गरिने सेवाहरु गौण बनेको आम नागरिकको बुझाई रहेको छ । स्वास्थ्य विमा योजनाका कारण अस्पताल प्रांगणमा मानिसहरुको भीड देखिएपनि बिमा गर्नेहरुनै अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाबाट रुष्ट बनेको पाईन्छ । अस्पतालमा उपचारगर्न आउने बिरामी र उपचार पछी अस्पतालबाट फर्किने दुबै पक्षबाट अस्पतालको सेवाप्रति सन्तुष्टि जाहेर गरेको पाईदैन । अर्थात सकारात्मक भन्दा नकरात्मक कुराहरु नै बाहिर आईरहने गर्दा अस्पतालको सेवा प्रति आम नागरिक सन्तुष्ट देखिदैनन् ।
डाक्टरको लापर्वाहीबाट महिलाको मृत्यु भएको भनि धौलागिरी अन्चल अस्पताल तनाव ग्रस्त !
स्वास्थ्य विमा गरेका नागरिकहरु अस्पतालमा उपचार गर्न आउँदा कुनै डाक्टरले विभिन्न परीक्षण गर्न ल्याबमा पठाउछन् । ल्याबमा रिपोर्ट लिनै घण्टौँ, उस्तैपरै एक दिन बित्छ । बल्ल बल्ल रिपोर्ट लिएर आयो सम्वन्धित डाक्टर भेट्नै गाह्रो । अर्को डाक्टरलाई देखायो, उहाँलाई सोध्नुस, उहाँले के कारणहरुबाट यो परीक्षण गर्न भन्नु भएको हो’ भनेर फर्काईन्छ । अस्पतालका प्रमुखलाई रिपोर्ट गर्न गए उल्टै ‘मैले गर्ने काम होईन…’ भनेर झपार्छन् । बिचरा बिरामी वा आफन्तको रिपोर्ट देखाउन डाक्टर खोज्दैमा अर्को दिन बित्छ । अनि आजित बनेर पोखरा तिर लाग्छन् ।
आईतबार धौलागिरी अन्चल अस्पतालका सूचना अधिकारी तीर्थराज गौतम संग ईबागलुङले सोधेको थियो, साउन १ गते देखी १३ गते आर्इंतबार सम्म कति जना बिरामीहरु अस्पतालमा आए ? उनले भनेका थिए १८१९ अर्थात दिनको सरदर दिनमा १४० जना ।
सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार अस्पतालमा १५ विशेषज्ञ सहित २१ जना मेडिकल डाक्टरहरुको दरबन्दी छ । तर हाल मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ड बाहेक अरु कुनै विशेषज्ञ डाक्टरहरु छैनन् । केहि दिन पहिले एक जना विशेषज्ञ डा सुशिल मोहन भट्टराई यहाँ आउनु भएको थियो एक दिन हाँजिर गरेर भोलि पल्टै फर्कनु भयो, गौतमले भने, अहिले तलब भत्ता वीर अस्पतालबाट खाने गरी उहाँको उतै काज सरुवा भयो । अब उहाँ फर्किएर आउने कुरो छैन ।’
महिला रोग विशेषज्ञ डाक्टर (गाईनोक्लोजिस्ट) कोहि नभएको गौतमको भनाई थियो । उनले भने, निलगिरी अस्पतालकी डा लक्ष्मी गौतमलाई करारमा ल्याईएको थियो, उहाँको म्याद सकिएपछी अस्पतालमा कुनै गाईनो डाक्टर हुनुहुन्न । ६ जना मेडिकल अधिकृतहर मध्य डा सुजन गौतम कन्सल्ट्यान्ट सर्जन भएकाले उहाँले सेवा दिई रहेको गौतमको भनाई थियो ।
पछिल्ला केहि घटनाहरुले अन्चल अस्पताल प्रतिको विश्वसनीयतमा निकै ह्रास आएको छ । एक सुत्केरी महिलाको योनीमा राखिएको प्याड नझिकी दिँदा उनले व्यहोर्नु परेको पीडा र केहि दिन पहिले बागलुङ रातामाटाकी एक महिलाको मृत्यु पछि उत्पन्न विषम परिस्थिती र अस्पतालबाट प्रकाशित क्षमा याचना सहितको प्रेस विज्ञप्तीका कारण अस्पतालको ईज्जत र प्रतिष्ठा माथि गम्भीर चोट लागेको चर्चा अहिले सेलाई सकेको छैन । यसै समाचारका सम्वन्ध केहि बिरामीहरुका आफन्तले गरेको कमेन्ट (टिप्पणी)ले पनि अस्पतालको बास्तविकता जाहेर गरेको छ ।
अहिले अस्पतालबाट मृगौला बिरामीहरुका लागि डायलसिस सेवा सुरु गरिएको छ । एउटा सकारात्मक पक्ष भनेको यहि नै हो, अस्पताल श्रोत भन्छ, । अहिले ६ जना मृगौला बिरामीहरुले यो सेवा नि:शुल्क लिईरहेको सूचना अधिकारी गौतमले ईबागलुङलाई बताए । उनले अरु थप दुई नयाँ मेहिन प्राप्त भैसकेको जानकारी दिँदै निकट भविष्यमा अरु बिरामीहरुले पनि सेवा प्राप्त गर्न सक्ने जानकारी दिए ।
धौलागिरी अन्चल अस्पतालको दु:खद पक्ष के देखिएको छ भने सदरमुकाम वरपरका नागरिकहरु पनि सानो सानो कुराहरुको उपचारमा सिधै पोखरा वा अन्यत्र जाने गर्छन । अस्पतालबाट प्रवाह गरिने सेवाबाट धेरै मानिसहरु ढुक्क छैनन् । ‘जीवनको सवाल छ, यहाँ अल्मलिनु भन्दा पोखरा जानु वेश’ प्राय: सबैको मुखराविन्दुबाट निस्कने बाक्य यहि हो ।
सर्बप्रथम अस्पतालबाट प्रवाह गरिने वा दिईने सेवाबाट आम नागरिक किन सन्तुष्ट छैनन् ? डाक्टर साहेबहरुले गम्भीरता पूर्वक सोँच्नु पर्ने विषय बनेको छ । मै राम्रो, मै जान्ने, अहं भावनाले अस्पतालको विश्वसनीयतामा कमी आएको हो कि ? आत्मालोचना गर्नु जरुरी छ । अस्पतालप्रतिको नकारात्मकता डाक्टरहरुले बिरामीहरु प्रति गर्नु पर्ने व्यवहारको अभाव नै हो । डाक्टरलाई भगवानको रुपमा मानेर उपचारमा आउने रोगी वा बिरामीले डाक्टरबाट गरिने तुच्छ व्यवहारले कस्तो पीडा बिरामीको हृदयमा पर्छ त्यो मनन गर्नु नितान्त जरुरी छ । डाक्टरको मुख या शरीर, उसको रिस या घमण्ड, उस्को अनावश्य चुरीफुरी हेर्न बिरामीहरु आएका हुन्नन् रोगबाट निदान पाउन आएका हुन्छन भन्ने बुझेर चलन चल्तीमा रहेका आफ्ना नराम्रा बानी व्यवहार त्यागेर बिरामी प्रति मीठो व्यवहार नगरेसम्म बिरामी अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा प्रति विश्वस्त हुदैनन् ।
स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरुमात्र अपमानित भएका छैनन्, जेष्ठ नागरिकहरुले पनि अस्पतालबाट खासै सम्मान पाएका छैनन् । सरकारले दिएको सुविधाहरुपनि खोसिने काम भैरहेको छ । उनिहरुप्रति सद्व्यवहार हुँदैन । यी सबै कुराहरुबारे संज्ञान लिएर यसमा सुधार ल्याउने जिम्मेवारी कस्को हो ? जिम्मेवारी वहन गर्ने नै गैह्र जिम्मेवार बनेपछी के सुधारको आशा गर्ने ? बिरामीलाई सान्त्वना दिएर विश्वस्त पार्नु पर्नेमा उल्टै तथानाम गाली गर्ने बानी व्यहोराले त अस्पतालको बदनाम गरउन सहयोग पुगेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न भागहरुबाट कुनै बिरामीहरु थप उपचारका लागि धौलागिरी अन्चल अस्पताल रिफर भएर आएको बिरलै देख्न सुन्न पाईन्छ । यसबाट पनि अन्चल अस्पतालले पाठ सिक्नु पर्ने हो, नकि अस्पतालमा आउने बिरामीहरुलाई पोखरा रिफर गरेर जिम्मेवारी निर्बाह गर्ने बानीलाई निरन्तरता दिने हो ।
भारतीय राजदूतावासबाट प्राप्त एम्बुलेन्सलाई हनुमानले सुमेरु पर्वत उठाएर ल्याएजस्तो ठान्ने मानसिकताबाट माथी उठेर विरामीहरुको उपचारमा दत्तचित्त रहेर सेवा गरे अस्पतालको सुवास यत्रतत्र फैलिन्छ । डा राघव धिताल, डा शोभा धिताल, डा धु्रब प्रधान, डा सोमनाथ अर्याल, डा बिधाननिधी पौडेल, डाक्टर तरुण पौडेलको सेवालाई यस क्षेत्रका जनताले बिर्सेका छैनन् । पाल्पाका ढकनारायण थापा (अहेब) उनको व्यवहार कुशलताले ‘डाक्टर थापा’ भन्ने नाम कमाएर गए । गर्नेलाई त टाढा टाढाका भएपनि सबैले सम्झन्छन नि, नगर्नेलाई त घरकै भएनि कुरा काट्छन् ।
मृगौला पीडित १२ वर्षिया वालिका बन्दनाको जीवनरक्षाको अपिल !
उपचाररत पत्रकार रानालाई जापानबाट ६१ हजार सहयोग